In ay budhcaddu diidday is casilaadda Siilaanyo dabadeed haraggiisa adeegsatay waa jariimad aad u weyn oo dhulgariir ah. Ibrahin Hawd | Haldoor News
In ay budhcaddu diidday is casilaadda Siilaanyo dabadeed haraggiisa adeegsatay waa jariimad aad u weyn oo dhulgariir ah. Ibrahin Hawd
Siilaanyo markii uu madaxnimada in yar hayay ayuu xanuunsaday, wax uuna noo sheegay in aanu hawsha wadi karayn oo umadda taladeeda ku celinayo. Laakiin annagii la shaqaynaynna ee uu na aaminay baa ka diidnay in uu sidaa yeelo. Dabadeed 8 sannadood baannu isaga oo aan waxba ka la garanayn muuqiisa meesha ku haysannay oo waxa aannu doonno samaynaynnay.
Sow caynkaa ma aha warka Xirsi-Gaab inoo sheegay? Laakiin ma qof aan awalba sidaa wax u ogayn baa innagu jira? Allaylehe ta aynnaan ogayni waa in Siilaanyo doonayay in uu xilka ka dego sida dastuurku waajibinayo, laakiin budhcaddu ka diideen. Sida aynnu wada og nahay xaaladdaa waxaa ka dhashay boqollaal arrimood oo midiba ta kale ka sii foolxun tahay, kuwaas oo markii ay is biirsadeen Soomaalilaand ka dhigay bahalo galeen aan wax sharci ah iyo wax akhlaaq ah la ga aqoon.
In ay budhcaddu diidday is casilaadda Siilaanyo dabadeed haraggiisa adeegsatay waa jariimad aad u weyn oo dhulgariir ah oo la ga galay dastuurka, umadda, madaxweynaha, akhlaaqda iyo wax wal oo dhawrid mudnaa. Waana is la budhcaddii kuwa weli dalka haysta ee doorashadii budhcadnimada ahayd samaystay. Yaa se isu joojinaya meeshuba sow ma aha bahalo galeen aanay jirin wax dastuur ah iyo wax akhlaaq ahi toonna?
Qalinkii: Ibraahin Hawd